BREAKING: नजिकैको विश्वव्यापी स्तरको परमाणु आपदा अलार्म नजिकै! मार्टिन भिजल्याण्ड
BREAKING: नजिकको विश्व-स्तरीय परमाणु आपदाको ठूलो अलार्म!
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	11 मार्च 2019 मा	• 10 टिप्पणिहरु
युरोपको सबैभन्दा ठूलो पावर प्लाटमा पछाडि आगामी आणविक आपदाको प्रभावकारी असर अब तुरुन्तै ठूलो अलार्म उठाउनुपर्ने कारण हो! मुख्यधारा मीडिया यस बारे मा चुप रहन्छ, तर एक कठिन सबै को लागी खतरा छ। के तपाईं बोर्ससेल वा टिहेंज (बेल्जियम) मा परमाणु बिद्युत संयन्त्रहरू थाहा छ? क्या तपाईं एक विस्फोट परमाणु ऊर्जा संयंत्र को व्यापक प्रभाव को जानते हो? त्यसपछि ध्यान दिनुहोस्!
40 भन्दा माथि सबै चेरनोबिल परमाणु आपदा अप्रिल 26 ले कलको रूपमा सम्झछ। अब अचानक परमाणु आपदा घर हो कि नजिक छ। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंले यो सन्देश प्राप्त गर्नुहुनेछ चाँडै सकेसम्म en सकेसम्म सम्भव छ शेयरहरू! अब तपाईले गरिरहनुभएको सबै कुरालाई अलग गर्नुहोस् र अहिले कार्य गर्नुहोस्! यो गम्भीर छ! यो तपाइँसँग मेल खाने, फ्याक्स, छाप्ने, वितरण गर्न र यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबैलाई तपाइँलाई थाहा छ वितरित छ।
हामी एक आपदाको बारेमा कुरा गर्दैछौं जसले प्रत्यक्ष रूपमा मानव अस्तित्वलाई असर गर्छ! मेगा अनुपातको परमाणु आपदा! एक विस्फोटक परमाणु ऊर्जा संयन्त्रले मात्र 1 प्रतिक्रिया: खिडकियां र ढोका बन्द र छिटो तहखाने मा छिपाउन को लागि! यूरोपमा एक पोष्टमा परमाणु आपदा रेडियोकर्मी विकिरण उत्पन्न गर्दछ जसले सबै खाना र पेय पानीलाई असर गर्छ। विकिरणलाई पहिले केहि मिनेटको लागि यति बलियो छ कि तपाइँलाई बाँच्नको लागि वास्तविक परमाणु वायु-आक्रमणको आश्रय चाहिन्छ। अचानक खतराको झटका ठूलो प्रभाव छ, किनभने यो एक सेकेण्डबाट अर्को आउँछ। यो स्पष्ट आकाशमा एक थन्डरप्लेट हो र रेडियो र टिभीमा कल एक ठूलो वायु अलार्मको साथ छ। सबैलाई पटक्कै छ र परिणामहरू भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ।
तथापि, यो परमाणु आपदा राति रातमा चोर आउँछ। यो परमाणु आपदा अपमानजनक हुँदै जान्छ। अलार्म घंटीहरू चुप लाग्छन् र तपाईं शान्तिपूर्वक सोच्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ आज विस्फोट परमाणु ऊर्जा संयन्त्रबाट आकस्मिक कल सुन्नुहुन्छ भने, तपाइँ लुकाउन सक्नुहुनेछ। तथापि, बेसारहीन र बेस्सरी जहर ग्यास; जहर जसले निरन्तर रूपमा तपाईंको घर प्रवेश गर्छ; तपाईं त्यो जहरलाई ध्यान दिनुहुन्न र तपाईं चुपचाप सास राखिरहनुहुन्छ। यद्यपि यो तपाईंको हृदयको हृदयमा छुन्छ। त्यसैले यो एक छ परमाणु आपदा.
बिस्तारै शरीर र सदस्यहरू आक्रमण तपाईले अर्को बिहानको अस्तित्व प्राप्त गर्नुहुनेछ। यो हत्यारे उनको समय लाग्छ। उनले बिस्तारै आफ्नो जीवन घुमाउँछन्। तपाईं यसलाई ध्यान दिनुहुन्न र वरपर हेर्नुहोस्। तपाईं वरिपरि कुनै पनि सूचना दिनुहुन्न। कसैले पटक्कै छैन। कसैलाई निराशामा पछाडी दौड्न लाग्दैन। सबैजना शान्त छ र हावाको अलार्म मौन रहन्छ। रेडियो र टिभी पनि चुस्त छन्। ताजा समाचार फिडमा हेर्नुहोस् कुनै पनि गलत जस्तो लाग्दैन।
अलार्म खाली देखिन्छ, तर यो छैन! समस्या यो हो कि परमाणु आपदाको सदमे प्रतिक्रियाले तपाईंलाई जम्प बनाउँछ। तपाईं दुर्व्यवहार गर्ने कुरालाई ध्यान दिनुहुन्न। यो आपदा धेरै निष्क्रिय छ। यो आपदा पीढी पीढी पछि फैलिरहेको छ। यो आपदा रेडियो र टिभि द्वारा पराजित हुने छैन। तिनीहरू जहर ग्यास वितरक हुन्! मिडिया, सोशल मिडिया र नियन्त्रित विपक्षी चिम्नी पाइपहरू हुन् जुन जहर ग्यास कम्प्लेटले देशलाई ढाक्छ। तिनीहरूले ब्रसेल्स र द हेगको जहर ग्याँस उत्पादकहरूको जहर वितरण गर्छन्। तिनीहरू तपाईंलाई निद्रामा राख्छन् र "आफ्नो आँखा बन्द र बियर" भन्नुहोस्, "मौसम आज सुन्दर हुनेछ"।
तिनीहरू तपाईंलाई उत्पादन प्रक्रियामा एक सहभागी पनि बनाउँछन्। तपाईं आफ्नो मत कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ र जहर गैस उत्पादनकर्ताको लागि उत्तम व्यवस्थापन चयन गर्नुहोस्। त्यसोभए उनीहरूले यो पक्का सुनिश्चित गर्दछ कि जहर जुन तपाईंको घरको दरारमा पुग्छ त्यो पनि अझ सुन्दर छ। तपाईं जहर ग्याँस उत्पादनकर्ताको वितरण सञ्जाल सप्लायर हुन सक्नुहुनेछ र आफ्नो प्रणालीको लागि काममा पैसा कमाउनुहोस्। टिभिमा तपाईंले मिठो स्वादको उत्कृष्ट सुगन्ध र नाकाबली प्रभावबारे छलफल गर्नेछौं। यो निर्माता हो जसले तपाईंलाई एकसाथको भावना दिन्छ।
हामीले हाम्रो जहर ग्याँस निर्मातालाई प्रेम गर्न थाले। हामी यसमा विश्वास गर्न आएका छौं। हामी कुनै पनि राम्रो जान्दैनौं, किनकि हामी एक देशमा जन्मेका छौं जहाँ जहर ग्याँस निर्माता सधैं त्यहाँ थियो। निर्माता जो सधैं प्रभारी थिए। हामी संधै नयाँ प्रतिनिधिहरु र निर्देशकहरु संग प्रस्तुत गरौं। यो वर्ष जस्तै भएको छ। Matthijs वैन Nieuwkerkjes रेडियो, टिभी र अखबार मा जहर ग्याँस स्वादिष्ट बेच रहे हो। नयाँ कारखानाको नयाँ बोर्डले यो समय चिमनीको माध्यमबाट जहर ग्यास पुर्याउँछ। नवीनतम जहर पनि स्वादिष्ट स्वाद गर्दछ र अझ बढि विषाक्तता दिन्छ।
किनभने कारखानाको अस्तित्वलाई बेच्न जारी राख्न चाहन्छ किनभने, यो सुनिश्चित गर्दछ कि जीवनका कोठाहरू डरलाग्दो छन्। यही कारणले कारखाना निरन्तर रूपमा देखाउँछ कि अझ अधिक अपराधीहरूले एकअर्कालाई धेरै हतियार र अधिक हिंसाको साथ मार्छन्। यी खतरनाक अपराधीहरूका लागि हेर्न ट्याबहरू र मोबाइल यन्त्रहरू पनि सुरक्षित छैनन्। समाचार पत्र, रेडियो र टिभि कार्यक्रम जीन ग्याँस कारखानाको गार्डले किसानलाई राम्रो तरिकाले हेर्छ र यसका घरहरू सबै यस सुरक्षाको लागि धेरै तिर्न तयार हुन्छन्। त्यतिन्जेल, तिनीहरूले हेर्ने ट्यूबमा सुनको पहेंलो तरल पदार्थ र घडी मनोरञ्जन पाउछन् वा ठूलो भवनहरूमा जान्छन् जहाँ जहर ग्याँस फैक्ट्रीका मिठाईहरू मिठाई हुन्छन्। जहर ग्यास कारखाना मानिसहरूको लागि सुन्दर छ। यसले सडक सञ्जाललाई राख्दछ र सबै पेय पानी, चिम्नी पाइप र अन्य सुविधाहरूको लागि पाइप नेटवर्क प्रदान गर्दछ।
द्वितीय विश्व युद्ध पछि, जहर ग्याँस फैक्ट्री वास्तव मा एक देश को पुनर्निर्माण गर्न को लागी थोडा धन वाला थियो। त्यसपछि हामी जेसिस ग्याँस कारखानाको निर्देशकले भूमि पुनर्निर्माण गर्न सक्दछौं। हामी विषाक्त ग्याँस कारखानाबाट विभिन्न व्यक्तिहरूको छनौट गर्न सक्छौं। यसबाहेक यो कारखानाका निर्देशकहरू आपूर्ति गर्ने भित्ताहरू र दोस्रो चचेरे भाई वा पूर्व शेयरधारकहरू र तिनीहरू धेरै राम्रा अतिथिहरू छन्। केहि भन्नु भनेको मलाई के सोच्नुहोस्, उदाहरणका लागि, र कहिलेकाहीँ पुरानो बोर्डको लागि धेरै सख्त छ। त्यो ठूलो मानिस हो! त्यसोभए जब उनीहरूले मलाई मतदान गर्न बोलाइदिन्छन्, म त्यो भन्दा धेरै मनपर्ने व्यक्ति छनौट गर्छु। यो समय मलाई थाहा छ: यो एक विद्रोही हुनेछ!
मैले सुनेको छु कि जहर ग्याँस निर्माता यति स्मार्ट हो कि त्यहाँ त्यहाँ एक विभाग छ कि मान्छे मा नजर राख्छ। जहर कि कारखानाले मान्छेलाई निरन्तर कमटोजोजी राज्यमा राख्छ, तर त्यसो भए उनी अझै पनि सामान्य रूपमा काम गर्न सक्छन्। अब र त्यसपछि त्यहाँ मानिसहरू जुन जहरील ग्याँसको ठूलो खुट्टा चाहिन्छ। तिनीहरू अचानक कारखानाको निर्वाचित व्यवस्थापनसँग सहमत छैनन्। यो देखिन्छ कि जहर ग्याँस निर्माताले आफ्नो पड़ोसीहरुलाई चीजहरु लाई नजर राखन को लागि भर्ती गरेको छ। तिनीहरू आफैलाई विरोधाभास पनि संगठित गर्छन्, ताकि मानिसहरूले थोपा भाप हटाउन सक्छन्।
यद्यपि, धेरै मानिसहरू अब जमिनको ग्यास संयंत्रको आधारभूत संरचना र प्रणालीमा निर्भर छन्; धेरै मानिसहरूसँग नौकरी छ संग सम्बन्धित of द्वारा प्रदान गरिएको जहर ग्याँस कारखाना, कि यो वास्तवमा रोजगारीको जीवनबाट जहर ग्यास कारखाना कल्पना गर्न असंभव छ। यसकारण मानिसहरूले कारखानाको लागि नयाँ बोर्डको लागि मतदान गर्न र जहर वास्तवमा साढे वर्ष भन्दा धेरै सुखद रहन सकेका छन्। तपाईं यसलाई लगभग एक प्रकारको काल्पनिक संग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ।
विगतका मानिसहरू आफ्नो pitchfork संग कूद र सम्पूर्ण तम्बू बन्द हुन सक्छ। कारखानाले पछि ठूलो गार्डको निर्माण गरेको छ। कारखाना त्यो खतराबाट यति डरलाग्दो छ कि उनी सबै चीजहरू र सबैजना सबैलाई माझ्छ। तिनीहरू यसो गर्छन् किनभने तिनीहरू भन्छन् कि गहिराइ प्रकारहरू जुन यहाँ र त्यहाँ आक्रमण गर्न चाहन्छन्, तर अन्ततः कारखाना र यसको चिमनी नेटवर्कको सुरक्षा बढ्दै गएको छ। घरहरूमा भएका मानिसहरूले सामूहिक सहभागिता रोक्न भने के गरे? घरहरूमा मानिसहरू किन विश्वास गर्न थाले र जहर ग्यास कारखानामा विश्वास गर्न थाले? के यो हो किनकि तिनीहरूले गन्ध समायोजन गरेका छन् र यस्तो स्वाद यस्तो कि तिनीहरूले यो मनपराउन थाले?
मानिसहरूले आफैलाई उत्पादन गर्न प्रयोग गर्थे। अब तिनीहरू पूर्णतया निर्भर हुन्छन्। उनीहरूले संवेदनाको आदीमा बसीरहेका छन् र वास्तवमा त्यहाँ यो पीढीको कुनै पनि छैन जुन अझै जान्छ कि यो जहरको अनसन बिना जिन्दगी जस्तो थियो।
तर हाँ, म पनि मतदान गर्न हिम्मत गर्न चाहन्नँ। त्यसपछि मैले केही गरेँ। र मेरो पास पिचफर्क छैन। वास्तवमा, म र मेरा छिमेकीहरू डरलाग्दो, निर्भर व्यक्ति भएका छन् तर सौभाग्य देखि हामी अझै पनि हाम्रो हेर्ने ट्यूब छ। अथवा म आफ्नो छिमेकीलाई सोध्न चाहन्छु यदि उसले वास्तवमा त्यो जहरबाट हटाउन चाहँदैन? सम्भवतः उनले आफ्नो मतदानलाई पनि आँसु पुछिन्? अरे होइन, यो सत्य हो: उसले फ्याक्ट्रीको गार्डको लागि काम गर्दछ। अथवा मलाई अझै पनि सोध्नुपर्छ? यो गहिरो जहर ग्यास हो!
वेबसाइटमा यहाँ लेखहरू पढ्नुहोस् जुन तपाइँले भन्दा अधिक मात्रामा फैलिने विषाक्त जहर ग्याँसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन्छ। गृहपृष्ठमा जानुहोस् र लेखहरू मार्फत ब्राउज गर्नुहोस्। यदि तपाईं जान्नु भएको छ भने तपाईलाई माथि जानुहोस् र तुरुन्तै कार्रवाई गर्नुहोस्! तपाईं तुरुन्तै आफ्नो परिवार र साथीहरूलाई चेतावनी दिनुहुन्छ! तर तपाईं केहि पनि गर्दैनौं। तपाईलाई पर्खनु पर्दछ जबसम्म डिजिटल पुलिस राज्यले पूर्ण रूपमा स्थापित गरेको छ र तपाईं र तपाइँको बच्चाहरू अब कुनै पनि ठाउँमा जान सक्दैन। वा तपाईं सोच्नुहुन्छ कि यो सबै ठीक हुनेछ, जबसम्म तपाईं र तपाईंका छोराछोरी निर्माता वा सम्बन्धित सेवाका लागि काम जारी राख्नुहुन्छ। तपाईं निष्क्रिय रहने गरी आफ्नै आफ्नै जेल र विषाक्तता निर्माण गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। यसको लागि समय क्रांति!
11 मार्च 2019 मा 10: 14
हामी कसरी निर्भरता को यस भ्रामक सर्कल को तोडने को लागि जाँदैछन?
झूटो बाहेक, हामी प्रारम्भिक उमेरबाट शिक्षा प्रणालीमा आत्मनिर्भर हुनु हुँदैन तर एक वयस्कको रूपमा प्रणालीमा ठाउँ लिन। यो प्रणालीले मानिसहरूलाई दमन गर्दछ र शोषण गर्दछ। अनिवार्य शिक्षा, टीकाकरण दायित्व, कर दायित्व ... तपाईं कानून पालन गर्न बाध्य छन्, जबकि शक्ति र सम्बद्ध प्राधिकरणहरूले तिनीहरूको द्वारा कानुन नियम र नियमहरूलाई बेवास्ता गर्छन्।
यदि तपाईंले मेरो जीवनमा कतिपय व्यक्तिहरूलाई वकीलहरूबाट प्राप्त गर्नुभएका खतरनाक पत्रहरू देख्नुहुन्छ भने, तपाइँ विश्वास गर्नुहुन्न कि यो एक लोकतान्त्रिक संवैधानिक अवस्था थियो। ओह हाँ ... शिकायत को अनुमति को लागी छ, तर यो प्राप्त गर्दै अर्को कहानी हो।
त्यसैले: हामी गुनासो गर्न सक्दैनौं र हामीले यो भन्दा राम्रो बनाउनु पर्छ!
यदि त्यो विफल भएमा, तपाईं केवल धेरै बेवकूफ हुनुहुन्छ, किनभने केवल बुद्धिमानी, रचनात्मक र मेहनत गर्ने दिमाग सफल छन् ... सही?
11 मार्च 2019 मा 10: 22
एक पटक फेरि कसैलाई माईजस्तो ग्याँसले काम गर्दैन र कसले प्रतिरोध गरेको छ। चलो हेर्नुहोस् कि हामी अझै पनि हाम्रो ठूलो डेटा र एअर प्रणाली संग त्यस्ता व्यक्तिहरू पकड्न सक्दछौं। अन्यथा गलगमा जानुहोस्
11 मार्च 2019 मा 10: 49
संयोगवश, म अझै पनि पर्याप्त pitchforks, prongs र हैंडलहरू छन् ... दुई chainsaw र सबै अन्य वानिकी उपकरणहरू, (तीव्र) अक्ष सहित। हो, म पनि कसरी संभाल्न जान्दछु! शायद गोलागमा भेट्नका लागि सम्भवतः उपयोगी हो, किनकी हामी यसलाई त्यहाँ गर्मीमा बस्न सक्दछौं, यदि तिनीहरूले यसलाई लिँदैनन् भने।
de.voet क्लिनिक@telenet.be लेखे:
11 मार्च 2019 मा 11: 52
सबैभन्दा पहिले, म तपाईंलाई बताउन चाहन्छु कि तपाईं यसको बारेमा धेरै थाहा छैन। निर्माण र निर्माणको सन्दर्भमा दिन र रातको फरक छ। यसैले एक परमाणु संयंत्र विस्फोट भने यो धेरै अजीब हुनुपर्छ। शीतलन प्रणाली मौलिक रूपमा अलग र सुरक्षा हुन्। रिएक्टरमा क्रकले सबै कामलाई प्रभाव पार्दैन। वैसे, यदि यो मलाई राम्रो लाग्यो, डच रिएक्टर जहाजहरु को निर्माताहरु र शुरु देखि जान्दथे कि यिनी दरारहरु यसमा (खराब गुणस्तर उत्पादन) थिए र अझै पनि वितरित भयो।
11 मार्च 2019 मा 11: 55
त्यसपछि म भन्न चाहन्छु कि तपाईंले सम्भवतः सम्पूर्ण लेख पढ्नुभएन र मलाई थाहा छैन कि म एकदम फरक फरक बनाउन एक रूपान्तर प्रयोग गर्दछु।
11 मार्च 2019 मा 11: 59
एक रूपान्तर (ग्रीक metaphora: स्थानान्तरण; विशेषण: स्थानान्तरणीय वा प्रतीकात्मक; antonym: शाब्दिक) इमेजरी को एक रूप हो, जसमा एक निहित (अस्पष्ट) तुलना छ।
11 मार्च 2019 मा 12: 49
बेल्जियम hahahahaha! समस्या / क्रिया / कुनै समाधान 🙂
11 मार्च 2019 मा 14: 58
ठूलो लेख तपाईंले स्पष्ट रूपमा समय र ध्यान दिनुभएको छ। जहाँसम्म मलाई चिन्ता छ, asap शासन परिवर्तन, एक गणतन्त्र जुन वास्तविक लोकतान्त्रिक, वास्तविक मानव अधिकार मनपर्छ। तर हो, मैले पहिले लेखेको रूपमा सामान्य व्यक्ति सामान्य संदिग्ध व्यक्तिहरू, बाहिरका व्यक्तिहरूलाई दास हुन चाहान्छु। साधारण व्यक्तिहरूले सामान्य संदिग्धहरूलाई पनि आफ्नो बनाइएका कथाहरूको रक्षा गर्दछ।
नेदरल्यान्ड्स लेम्बिल्यान्ड, पोर्टल, बाल पोर्टल, पैसा लिन्डिङ देश, सबैभन्दा महत्वपूर्ण सामान्य संदिग्ध देशहरू, एक लेनदेन देश जो कि एक अजनबी मा देनदार देशहरू राख्छ र यसलाई free.etc भयानक कपडात्मक देशलाई अनुमति दिन्छ। यो सामान्यतया संदिग्ध व्यक्तिहरूले आफ्नो मुख्य पदहरू हस्तान्तरण गर्दा मात्र परिवर्तन गर्दछ। यो स्वैच्छिक रूपमा हुनेछैन। चुनावले यसको विपरीतमा मद्दत गर्दैन।
11 मार्च 2019 मा 22: 32
हहाहा, धेरै राम्रो सोचा र सुन्दर वर्णन गरिएको!
एक राम्रो चारा "एक परमाणु आपदा", तपाईंलाई एक अलग तरिका मा फेरि उठाउन।
12 मार्च 2019 मा 06: 10
जस्तै आयोडिन गोलहरु थाइरोइड ग्रंथि को संतृप्त छ, हामी यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि हाम्रो आत्मा सत्य संग संतृप्त छ ताकि जहर बादलहरु मा कुनै प्रभाव छैन।
तपाईं आफ्नो सान्त्वना क्षेत्र बाहिर जानकारी इकट्ठा गरेर आफै भित्र अनुसन्धान गरेर यो सत्य पाउन सक्नुहुनेछ।
यस तरिकाले तपाइँ आफैलाई पुनरुत्थान गर्न सिक्नुहुन्छ र अन्तमा तपाईं बाहिरबाट जहरको प्रतिरक्षा हुनुभयो।
« तपाईले यो चुपचाप पढ्नु पर्छ जीवनमा साँचो पाठ हो
तत्काल कल! »
कुल भ्रमण: 11.612.519